November 25, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 11
ဂလာစတာဆာရီကလပ်ဥက္ကfor္ဌအဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ Ozan Korkut သည် TRT ရေဒီယို ၁ မှaည့်သည်ဖြစ်သည်။ Fatih Terim အားသူ၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကတိတော်၌အခွင့်အာဏာပိုမိုပေးသင့်ကြောင်းအလေးအနက် ပြော၍ Ozan Korkut မှအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“Fatih ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ Galatasaray ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါ Galatasaray Sportif AS မှာသူ့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးချင်တယ်။ နည်းပြလည်းဖြစ်ချင်တယ်။ ဘဏ္theာရေးအခြေအနေကိုဆရာကိုရှင်းပြရမယ်၊ ငါတို့ညှိနှိုင်းရမယ်။ သမ္မတမဟုတ်ဘဲအားကောင်းသည့်သမ္မတသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဂလာတိဆာရာအတွင်းမှလာသူသမ္မတသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ရှိသည်။
Mustafa Cengiz ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းဝေဖန်သူ Ozan Korkut “Mustafa Cengiz အုပ်ချုပ်ရေးကိုငါအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါအုပ်ချုပ်ရေးကိုမထုတ်ပေးခဲ့ဘူး။ ငါအထွေထွေညီလာခံထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုပြောလိုက်တယ်။ Galatasaray ရဲ့အခြေခံမူများနှင့်အခွင့်အရေးများကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုပါသလား။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဖော်ပြခဲ့တဲ့စီမံကိန်းများကိုဘယ်နှစ်ယောက်ပြုမိခဲ့ကြသလဲ 30 စီမံကိန်းများ၏သာအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်ပါကလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေးဆွဲအနာဂတ်အစီအစဉ်ကဘာလဲ? ဤပစ္စည်းမလုံလောက်သောကြောင့်ငါကဖြန့်ချိမပြုခဲ့။ ငါအလုံအလောက်ငါကပြောသည်မည်သူမဆို, ဒါပေမယ့်အမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ “ အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO868 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERBAHİS489 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBABA138 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO618 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERBAHİS630 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! SULTANBET568 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! RESTBET501 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ
11 Comments on RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’
ASUMAN November 26, 2020 at 12:30 am
HACI MEHMET November 26, 2020 at 1:50 am
HAZAN November 27, 2020 at 4:20 am
AHMET MELİH November 27, 2020 at 7:00 pm
RAŞAN November 28, 2020 at 2:10 pm
GÜRKAN November 30, 2020 at 5:20 pm
restbet yeni adresi sorun yaşıyorum lütfen yardım
VOLKAN December 2, 2020 at 6:10 am
ESRA December 2, 2020 at 7:50 am
restbet bonus restbet oynama şansı az sunuyorlar
MUSTAFA December 2, 2020 at 8:10 pm
YILMAZ December 8, 2020 at 12:10 pm
ÖZLEM December 9, 2020 at 12:10 am